လာရီဆန်ဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1968-07-1https://twitter.com/viber6) အမှား။ မရေရာသော အချိန်။ အမှား။ မရေရာသော အချိန်။၊ အမှား။ မရေရာသော အချိန်။ (အသက် ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော စကားလုံး "https"။)
၃ နျူပီးဒီးယားနှင့် ဝီကီပီးဒီးယား
၃.၁ ဝီကီပီးဒီးယား၏ ရင်းမြစ်
ဘဝအစောပိုင်း နှင့် ပညာရေးပြင်ဆင်
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဆန်ဂါသည် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ “နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်အခါ ပညာရေးနှင့် သင်ကြားမှုမျာတွင် လေ့လာရှာဖွေသူများကို အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များ အလျှံအပယ်ရှိနေခြင်းသည် အံ့ဩနဘန်းဖြစ်စေသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အမြဲတမ်း လျင်မြန်စွာအဖြေများကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ လူစုလူဝေး၏ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းများ စသည်တို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ ဝီကီပီးဒီးယားနှင့် ယူကျူ့ကဲ့သို့သော ရင်းမြစ်များသည် သတင်းအချက်အလက်များ ဖန်တီးရာ နေရာများ ဖြစ်လာမည်။ ထိုကဲ့သို့သော များပြားသည့် နယ်ပယ်များတွင် တိုးတက်မှုများသည် မိမိကိုယ်လည်း အံ့အားသင့်စေသည်။ ထို့ပြင် သူသည် သတင်းအချက်အလက်များ များပြားစွာ ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝနေထိုင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်စေမည်နည်း။ ထိုအရာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အမျိုးမျိုးသော ပြောင်းလဲမှုတို့၏ ဆက်သွယ်မှု ဖြစ်သလား။ နောက်ဆုံးတွင် အင်တာနက်တိုးတက်ဖြစ်တည်မှုသည် ပညာရေးပြောင်းလဲမှုကို မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်စေမည်နည်း” စသည်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Walker2014
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Chillingworth
↑ Anderson၊ Nate။ "Larry Sanger says "tipping point" approaching for expert-guided Citizendium wiki"၊ Ars Technica၊ November 21, 2007။ November 21, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Wade_Roush
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Education
↑ Joseph Michael Reagle (2010)။ Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia (1 ed.)။ MIT Press။ p. 35။ ISBN 1452567905။
↑ Jennifer Joline Anderson (2011)။ Wikipedia: The Company and Its Founders (1 ed.)။ Abdo Group။ p. 74။ ISBN 1617148121။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Marshall Poe
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Daniel H Pink
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Carey၊ Tanith။ "Can you teachababy to read?"၊ Independent Online (South Africa)၊ January 2, 2013။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လာရီဆန်ဂါ&oldid=698915" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။